Muuse Biixi oo dabciyey mowqifkiisa wadahadalka Somaliland iyo DF
Wadaxaajoodka dhinacyada ayaa hakad ku jira tan iyo sanadkii 2014-kii | Xuquuqda Sawirka: Online
HARGEYSA, Somaliland – Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa dabciyey mowqifkiisa ku aadan wadahadalka dowlada federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho iyo maamulkiisa.
Isaga oo ka hadlayay dabaaldega 28-sano guurada markii ay Somaliland ku dhawaaqday in ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale, Biixi ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadaxajaoodka labada dhinac.
"Aan soo afjarno kala aragti-duwanaanshiyaha tobanka sano socota ee aan macnaha lahayn, oo aan wadaadno, derisnimo, nabad, maalgelin iyo ganacsiga labada shacab," ayuu hogaamiyaha maamulka gooni isu taaga ah yiri.
Wadahadalka Soomaaliya-Somaliland ayaa hakad ku jira muddo afar sano ah tan iyo markii wareegii ugu dambeeyay lagu qabtay Turkiga sanadkii 2015-kii, wallow aysan jirin wax natiijo ah oo ay isla garteen darafyada.
Kahor isu-imaatinka, madaxweyneyaashii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Siilaanyo, ayaa December 2014-kii ku kulmay Jabuuti kadib heshiisiin 2013-kii ka dhacday Turkiga.
Xukuumadaha cusub ee laba dhinac ka jira ayaa nan wax talaabo oo muuqata ka sameynin arrinta wadaxaajoodka xili Beesha Caalamka ay ku baaqeyso in dib loo bilaabo dedaalada midnimadda.
Wadahadalka oo kasoo bilowday Shirka Arrimaha Soomaaliya ee London oo Febraayo 2012-kii lagu qabtay Lancaster House ayaa ahaa midkii ugu horeeyay oo Soomaalida loo qabto tan 1991-dii.
Xeel-dheerayaasha siyaasada tilmaamaya in dhinacna uusan siinin wadahadalka ahmiyada uu mudan yahay. Ka go'naanshiyo la’aanta iyo in aysan dhab ka ahayn waxay fashilisay kulamadii UK, Jabuuti iyo Turkiga.
Aragtida Somaliland ee ah in ay noqoto dowlad madax banaan ayaa dharbaaxo ku ah xukuumada Muqdisho oo qudheeda ku doodeysa "Midnimada Soomaaliya waa muqadas". Kuwani waa doodaha xasaasiga ee wadahadalka hareeyay.
Waqti xaadirkaan, dalal ay ku jiraan Eritrea, Jabuuti, Turkiga, Itoobiya iyo qaar kamida wadamada Yurub ayaa muujiyay xiisahooda ku aadan in ay doonayaan fududeynta wadaxaajoodka Soomaaliya-Somaliland.
Doorka saaxiibada caalamka ee taageerida wadaxaajoodka ayaa kaliya ku kooban fududeyn, waxaana dadka Soomaaliyeed ay rajeynayaa in ay darafyada ay wareega ugu dambeeya heshiis wadagaari doonan.
ICG oo farta ku fiiqday wadamo soona jeedisay in dal uusan martigelin wada xaajoodka ayaa soo bandhigtay madasha ku haboon.
Muuse Biixi oo difaacay kulankii uu la qaatay wasiirada Soomaaliya
Somaliland 21.08.2019. 12:27
Wasiiro katirsanaa DDSI oo laga sii daayay xabsi ku yaalla Somaliland
Somaliland 26.08.2018. 16:23